प्रचण्डदेखि कमल थापासम्मको दसैं : पूर्वराजा छाडेर दाजुबाट टिका थाप्नेदेखि चुनावी रणनीतिसम्म - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रचण्डदेखि कमल थापासम्मको दसैं : पूर्वराजा छाडेर दाजुबाट टिका थाप्नेदेखि चुनावी रणनीतिसम्म
अशोज ९ गते, २०७४ - ११:३७
काठमाडौं । दसैं शुरु भइसकेको छ । नेपालीहरुको बिशेष चाडको रुपमा हेरिने दसैंसँगै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावले राजनीतिक दलहरुलाई छपक्कै छोपेको छ । भुगोल समुदाय र बर्ग अनुसार दसैं मनाउने आ–आफ्नै तौरतरिका छन् । दसंलाई सामाजिक, पारिवारिक र धार्मिक चाडका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । घर परिवारबाट टाढिएकादेखि चिसिएका सम्बन्ध समेतलाई जोड्ने काम गर्दछ दसैंले । प्रायः दसैंलाई मिठो खाने, नयाँ लगाउने एवं फुर्सदिलो र मनोरञ्जनका हिसाबले मनाउने प्रचलन पूरानै हो । धेरैजसो मानिसले दसैंलाई सोहिअनुरुप नै मनाउने गर्दछन । तर देशका प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरुले दसैंै कसरी मनाउछन होला ? यसमा सबैको चासो हुन सक्छ । नेपाली राजनीति घुमाउने देशका ५ शीर्ष नेताले यस बर्षको दसैं कसरी मनाउँदैछन् ?
भेटघाटममै बित्छ देउवाको दसैं
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको खासै दसैंको योजना भने बनेको छैन् । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै परिवारसँग दसैंै मनाउने मनसायममा छन् देउवा । हरेक वर्ष पण्डितहरुको हातबाट टीका लगाउँदै आएका उनले परिवारसँगै नातागोता र पार्टी कार्यकर्तालाई टीका लगाईदिने गर्छन् । दसैंकै लागि भनेर उनले खासै किनमेल नगर्ने उनले मासुका परिकार पनि कम खाने गरेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक र पारिवारिक भेटघाटमै दसैंभर ब्यस्त रहने छन् ।
ससुराली धाउँदैनन् केपी ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपालिका दसैंै भक्तपुरकोे बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा मनाउने तयारीमा छन् । उनले आफ्ना बाबुको हातबाट टीका लागाउँने छन् भने ससुराली जादैनन् ओली । विगतको दसैं जस्तै यसपालि पनि उनले आफ्ना सुभचिन्तक, आफन्त तथा कार्यकर्तालाई टिका लगाईदिने कार्यक्रम रहेको छ । दसैंै अवधिभर ओली पारिवारिक र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहने छन् । बालकोटस्थित ओली निवासमा दसैंैको टिका लगाउन कार्यकर्ताहरु आउने गर्दछन् ।
दसैंभर चुनावी रणनीति तय गर्ने मूडमा प्रचण्ड
दुई दशकदेखि दसैंको टिका नलगाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दसैंैमा अरुलाई टिका लगाइदिने कार्यक्रम पनि छैन । उनले कार्यकर्ता र आफन्तसँग दसैंको शुभकामना आदान प्रदान र भेटघाट गरेपनि खास दसैं बिशेष कार्यक्रम बनाएका छैनन् । उनको परिवारमा दसैंै पनि अन्य समय जस्तै गरी बित्नेछ । उनले दसैंैलाई सामाजिक र पारिवारिक चाडका रुपमा मनाउने छन । उनी दसैं अवधिभर लाजिम्पाटस्थित आफ्नै निवासमा रहने छन् । यसपालि दसैंको समयमा उनी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावी रणनीति तय गर्न व्यस्त रहने उनका प्रेस संयोजक मनोहरी तिमल्सिनाले खबरडबलीसँग बताए ।
पूर्वराजा छाडेर दाजुको हातबाट टिका थाप्दै कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा यसपालि दसैं परिवारसँगै मनाउने तयारीमा छन् । प्रत्येक बर्ष दसैंमा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट टिका लगाउने उनले यसपालि आफ्ना दाजु नेत्रबहादुर थापाको हातबाट टीका लगाएर क्षेत्रपाटीस्थित ससुरालीमासमेत टिका थाप्न जाने कार्यक्रम छ । थापा फुर्सदको समयमा पुस्तक पढ्न रुचाउँने भएकाले यसपालि दसैंमा पुस्तक पढ्ने योजना बनाएको उनको सचिवालयले बताएको छ । त्यसका साथै राजनीतिक र पारिवारिक भेटघाटमै उनले दसैंको समय बिताउने छन् ।
बाबुको हातबाट टिका थाप्छन् बाबुराम
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई दसैं अवधिभर काठमाडौंमा रहने छन् । आफ्ना बाबुको हातबाट टिका लगाउने तयारी गरेका भट्टराई ससुराली जाँदैनन् । उनको यो दसैंको अधिकांश समय चुनावी रणनीति तय गर्ने र अध्ययनमा बिताउने तयारी गरेको उनका स्वकिय सचिव विश्वदीप पाण्डेले खबरडबलीलाई बताए । भट्टराईको दसैंको लागि त्यस्तो खास योजना बनेको छैन । उनले अरुलाई टिका लगाइदिने कार्यक्रम पनि छैन ।
अशोज ९ गते, २०७४ - ११:३७ मा प्रकाशित
आजसम्म नेपालले कुनकुन देशलाई पठायो गैडा ?
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बिभिन्न देशमा हालसम्म २६ गैँडा उपहारस्वरुप पठाइएको छ । निकुञ्जका...
नेकपाको निर्णयः महाधिवेशनमा भाग लिन अध्यक्ष पनि चुनिनुपर्ने
रोकिएन सुन तस्करीः अवैध सुन सहित तिलगंगाबाट दुईजना पक्राउ
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो सक्रियता
सरकारी ढुकुटीमा मनोमानीः सार्वजनिक बिदाको दिन ४ अर्बको चेक